तपाईलाई थाहा छ ? क्यान्सरबाट बच्न टमाटरको सेवन फलदायी हुन्छ – ताजा समाचार
तपाईलाई थाहा छ ? क्यान्सरबाट बच्न टमाटरको सेवन फलदायी हुन्छ
– यसमा सायदै कसैले शंका गर्ला कि फलफूलले हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ । हाम्रो राम्रो स्वास्थ्यका लागि फलफूल निकै आवश्यक हुन्छ । र, हामीले नियमित रुपमा फलफूलको सेवन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसो त हरेक फलफूल आआफ्नो प्रकृतिअनुसार निकै फाइदाजनक पनि हुन्छ । कतिसम्म भने कुनै फलफूलले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्न सहयोग गर्छ भने कुनैले हाम्रो मुटु राम्रो राख्न वा आँखालाई तेजिलो राख्न ।
यस्तै एउटा सब्जी हो, टमाटर अर्थात् गोलभेँडा । तर, यसले एउटा मात्र फाइदा पुर्याउने होइन, यसले त हामीलाई पाँच विभिन्न किसिमका क्यान्सरबाट बचाउन सहयोग गर्छ ।
अल्छी मान्छेले जीवनमा कहिल्यै सफलता पाउँदैन । यस्तो मानिस निराशावादी हुन्छ । यहाँ हामी केही उपाय बताउँछौं जसलाई अपनाउँदा तपाईंले आलस्य हटाउन सक्नुहुन्छ । १) बिस्तारै हिँड्ने बानी : बिहान उठेर भ्रमण गर्नु स्वास्थ्यका लागि आवश्यक कुरा हो । दौडिन अल्छी लाग्छ भने शुरुमा बिस्तारै हिँड्नुस् । दश मिनेट मात्र हिँडे पुग्छ । यसो गर्दा तपाईंको क्षमता बढ्छ र आलस्य भाग्छ । २) ससाना ब्रेक : लामो समयसम्म बसेर गर्ने काम छ भने केही समयको अन्तरालमा छोटाछोटा ब्रेक लिनुस् । उदाहरणका लागि ४५ मिनेटपछि पाँच मिनेट जतिको ब्रेक लिनुस् । यसबीचमा अलिकति टहल्नुस् । लगातार काम गर्दा थाकेर अल्छी लाग्छ ।
३) कामका बेलामा मोबाइल साइलेन्ट : आजकल मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा झुण्डिएर दिन बिताउँछन् । कामको समयमा पनि उनीहरू मोबाइलमा घरिघरि हेरिबस्छन् । यसो गर्दा काममा बाधा पुग्छ । काम गर्दा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुस् । ध्यान बाँडिदा पनि थकाइ लाग्छ । ४) प्रेरक व्यक्तिसँग समय बिताउने : अल्छी लागेर दिमागमा नकारात्मक कुरा आएका बेलामा आफ्ना साथीहरूसँग समय बिताउनुस् । केही सिक्न पाइने र तपाईंलाई प्रेरणा मिल्ने मानिसको संगतमा समय बिताउनुस् । ५) आफैंलाई मजबुत बनाउनुस् : अल्छीपना हटाउनका लागि अर्काले प्रेरित गरेर पुग्दैन । तपाईं आफैंले आफूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ र मजबुत बनाउनुपर्छ ।